Muxuu Yahay Mashruuca Wadada Xariirku? | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaMuxuu yahay mashruuca wadada werwerka ah?
27 / 09 / 2018 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Nidaamyada Tire Wheels, Headline
khariidadda mashruuca cagaarka
Muxuu Yahay Mashruuca Wadada Xariirku? : Sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray horumarro muhiim ah oo ku saabsan saadka ee adduunka. Mid ka mid ah horumaradan ayaa ah awooda dhaqaale ee cusub ee ay China ka saartay. Qaar badan oo ka mid ah badeecadaha adduunka ayaa si toos ah ugu maalgashanaya maalgashigoodii dalkan, oo ku dhowaad dhammaan wax soo saarkooda waxay u wareegeen gobolkaan.
Madaxweynaha Shiinaha, Shi Cinping, wuxuu soo jiidday dhammaan dareenka isagoo leh mashruuc uu ku dhawaaqay 2013. Mashruuca Wadada Xariirku wuxuu diiradda saarayaa dadaallada loogu jiro dib-u-hawlgelinta Xarigga Xariirka, kaas oo isku xira Bartamaha Aasiya, Bariga Dhexe iyo Yurub.
Muxuu mashruucu ku lug leeyahay?
Madaxweynaha Shiinaha, Shi Cinping, wuxuu daah-furay mashruuciisa weyn ee 2013 si uu dib ugu soo nooleeyo Wadada Siliga Taariikhiga ah. Mashruucan waxaa ku jiray dalal badan oo Yurub ah illaa Aasiya Bartamaha. Wajiyada mashruucan dhexdeeda, waxaa loogu talagalay in lagu dhiso khadad tareeno cusub, dhuumaha tamarta, jidadka badda iyo wadooyinka waaweyn ee Eurasia sidaas awgeedna si dhakhso leh loogu sameeyo saadka.
Wajahadda mashruucan dhexdeeda, maalgashiga kaabayaasha ah ee 40 bilyan oo doollar ayaa la qorsheynayaa in laga sameeyo dalalka Bartamaha iyo Koonfurta Aasiya. Waayo, kanu, Bank Kaabayaasha Asian ah (AİİT) waxaa la aasaasay oo ahaa xubin aasaase ah mid ka mid ah bangiyada dalka Turkiga. Ujeedada ugu weyn ee Bangigu waa inay maalgaliso mashruucan. Mashruucu kaliya maahan mid dhaqaale, laakiin sidoo kale juqraafi ahaan.
Codsiyada Mashruuca Jiilaalka
Ilaa dhammaadka sanadka, khadka tareenka ugu dheer adduunka wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo dhamaadka 2014. Dhanka kale, qeybta mashruuca badaha ee mashruucan, waxaa la saadaalinayaa in saadka maraakiibta badda ay ka heli doonaan waxqabad waddo ka timaada Shiinaha ilaa Hin Bay iyo Badda Mediterranean-ka.
Hirgelinta Mashruuca Road Silk dalka Turkiga
Turkey, Road Project ah Silk, Borusan Logistics, hantideeda u adeegsato waxyaabaha la taaban karo oo ku yaalla Kazakhstan ayaa la ururiyaa hab this. Codsigan, dadka iyo hay'adaha doonaya inay gaadiid ku sameeyaan Shiinaha iyagoo adeegsanaya Boristics Logistics waxay heli karaan badeecadooda inta u dhaxaysa maalmaha 14 iyo 18.
Iyadoo la adeegsanayo Borusan Lojistik, waad ka shaqeyn kartaa saadka Shiinaha oo waxaad ku xallin kartaa macaamil xawaaladahaaga waqti gaaban adoo aan sugin waqti dheer.
Waddo Xariiqo Cusub ah = Hal Hal Fuud Hal Waddo
Wadada cusub ee loo yaqaan 'Silk Road' waa Wadada Hal Belt One, Mashruuca Hal Wadada Hal Wadada ee Shiinaha. In kasta oo dhaqdhaqaaqyada ka socda raadad taariikhi ah lagu muujiyey si la mid ah sida khariidadda kor ku xusan, Mashruuca Bir Kuaşk Bir Yol waa bartilmaameed istiraatiiji ah oo isku xira Aasiya, Yurub iyo Afrika waddooyinka ganacsiga iyo tamarta, kuwaas oo isku dhafan jidadka tareenka dhulka, dekedaha dekedaha iyo dekedaha ilaa badda. Jidadka isku xidhka ee mashruuca jiilka iyo qaar ka mid ah dekedaha muhiimka ah waxaa lagu muujiyey khariidadda hoose.
WAA MAXAY BELT?
Fikradda jiilalka ayaa tilmaamaysa aruurinta shabakadaha gaadiidka dhulka, laga bilaabo Bartamaha Shiinaha iyo fidinta min Moscow, Rotterdam ilaa Venice, jidka, wadada tareenka, dhuumaha shidaalka iyo gaaska iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha. Mashruuca, halkii laga isticmaali lahaa hal wado, dariiqyada marinnada dhulka ee jihada Aasiya-Yurub ayaa la qorsheeyay. Wadooyinka qorsheysan ayaa ah:
Shiinaha Mongolia Russia
Shiinaha ee badhtamaha iyo galbeedka Aasiya (Turkey weli waddooyinka kuwaas gudahood)
Shiinaha Tile Peninsula
Shiinaha Bangladesh India Myanmar
Fikradda wadada ayaa u dhiganta shabakadda badda ee mashruuca. Baaxadda mashruucan dhexdeeda, shabakad dekedo ah iyo dhismayaal kale oo xeebeed ayaa la qorsheeyay in laga sameeyo gobolka badaha oo laga bilaabo koonfurta iyo koonfurta bari Aasiya ilaa Bariga Afrika iyo waqooyiga Badda Mediterranean.
Wadooyinka dhulka iyo bada ee ku dhexyaal baaxadda mashruucu wuxuu ka gudbayaa qaaradaha Aasiya, Yurub iyo Afrika, taasoo u oggolaaneysa dhaqaalaha Shiinaha iyo dhaqaalaha Yurub ee horumarsan inuu ku xirnaado. Hindisahan, isla mar ahaantaana, Thanks to iskaashi dhinacyo badan leh oo lala yeesho wadamo kale, Shiinaha wuxuu udub dhexaad u noqon doonaa xalka dhibaatooyinka caalamiga ah, wadada ayuu furi doonaa, wuxuu sheegay inay gacan ka geysan doonto. Mashruuca 'Ii, waan lu', marka la eego doorka Shiinaha ee kor u qaadida siyaasada adduunka iyo dhaqaalaha, wuxuu qaabeeyaa sanadka soo socda ee 50.
Aasaasidda Ururka Iskaashiga Shiinaha ee uu hoggaamiyo Shiinaha ee 2001 wuxuu u oggolaaday Shiinaha, oo awood hore u lahayd, inay dejiso nidaam iskaashi dhow iyo iskaashi xagga nidaamka isbahaysiga. 2013 waxaa shaaciyey Madaxweynaha Shiinaha Shi Cinping intii uu ku guda jiray booqashadiisa Kazakhstan iyo Indonesia. Markii Sanduuqa Waddada Silk iyo Bangiga Kaabayaasha iyo Maalgashiga ee AIIB (AIIB) lagu daray mashruuca One-Way iyo One-Way ee mashruucyada Century Marine Silk Road, furitaan weyn oo xagga dhaqaalaha ah ayaa laga furay Nidaamka Atlanta ee Mareykanku hoggaaminayo ee gobolka Aasiya-Pacific.
Waa Darajooyin dalalka 65 oo ay ku jiraan Turkiga ee mashruuca. Wadamadan waa gobol gobol:
Bariga Aasiya: Shiinaha, Mongolia
Koonfur-bari Aasiya: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam
Badhtamaha Aasiya: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika: Baxrayn, Masar, Iran, Ciraaq, Israel, Jordan, Kuwait, Lubnaan, Cumaan, Qatar, Sacuudiga, Falastiin, Syria, Imaaraadka Carabta, Yemen
Koonfurta Aasiya: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
Europe: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia iyo Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine
Mid-halkaas oo waddada Turkey ah, siday taariikhda u soo kabashada ee Road Silk ah. Wadarta maalgashiga Wadada Dhexe waxaa la filayaa inuu gaaro triliyanka 8 tiriliyan doolar. Waxaa la sheegay in kaliya 40 bilyan ee qaddarkan loo qoondeyn doono kaabayaasha gaadiidka. Marxalada koowaad ee mashruuca loogu talagalay is dhexgalka ee Turkey heshiiska ay kala saxiixdeen labada dal 40 billion dollars miisaaniyad la saadaalin karo. Qaddarka loo qorsheeyay in lagu kharash gareeyo sannad walba maalgashiga waa 750 milyan oo doolar.
Turkey, mid ka mid ah mashruuca waddada kale la meel geopolitical for OBR ah waxa uu ku yaalaa on Central Corridor. OBR ku taallaa at hal dhibic oo muhiim ah oo ku saabsan wadada Turkey ah, meesha xoog geopolitical, wax soo saarka xoog leh oo ka iman kara sare ee Badda Madow taagan sidii iyagoo ah dal transshipment muhiim ah la dhaqanka gaadiidka. Iyada oo leh mashruucyo mega sida Yavuz Sultan Selim iyo Osmangazi Bridges, 18 Mart Çanakkale Bridge iyo Eurasia Tunnel, waa giraan muhiim ah oo bixin doonta saadka muhiimka ah iyo fursadaha gaadiidka ee mashruuca 'Hal Wadada Hal Qarniga' ee Shiinaha.
mashaariicda iskaashiga ganacsiga Shiinaha-Turkey mooyee sidoo kale muujinaya koritaanka joogto ah. Muuqaalka dhoofinta dhoofinta 2016'n ee udhaxeysa labada dal ayaa kordhay boqolkiiba 1.9 boqolkiiba 27 bilyan 760 milyan oo doolar ayaa gaartay. Shiinaha, xnumx'unc suuqa dhoofinta ugu weyn ee Turkiga iyo dalka ugu weyn ee soo dejinta.
Mashruuca Shidaalka ee Shiinaha ee Shirkadda Ganacsiga ama Ganacsiga ee lagu aasaasay Wadamo Tababaran
TCDD, Iron Silk Road mashaariicda loo isticmaali doono diyaarinta khariidadaha Shiinaha `
Silk Road iyo Turkey
Marmaray iyo Road Silk Road
Marmaray waa waddanka oo dhan wadada jidka Iron Iron Road